Adobe ichauraya Flash na2020 | Linux Vakapindwa muropa
Adobe ichauraya Flash na2020
Gnu / Linux inochengetedza uye inokurudzira matekinoroji emahara uye Yemahara Code. Nekudaro, kwekanguva, software yekutengesa yaive chinhu chinodiwa kuvanhu vazhinji. Muenzaniso wakajeka weinodiwa software yekutengesa ndeye Flash, Adobe's peji rewebhu tekinoroji yatinoda kufamba neInternet.
Maawa mashoma apfuura, Adobe yakashuma kuti 2020 ichave kupera kweiyi tekinoroji. Kune iro rairi kushanda nemakambani akasiyana siyana kufarira mamwe matekinoroji anowedzera mashandiro uye kubatsira kweAdobe Flash.
Kune atove akawanda vashandisi nemakambani ari kushanda pane dzimwe mhinduro kune ino tekinoroji. Mozilla inopa sarudzo; Google iri kutsigira nekuvandudza Html5 uye WebGL; Uye, vazhinji vanogadzira webhu vari kusimuka kubva kumaturusi anoshandisa Flash pamwe kukurudzira zviitiko zvisingade Adobe Flash.
Adobe inoziva kuti tekinoroji haisi kubatsira uye nekudaro ichabvisa tekinoroji gore rinouya 2020, kunyangwe ichaenderera mberi kuburitsa zvidzoreso zvekuchengetedza kune vashandisi vachishandisa ichi chigadzirwa cheAdobe. Neraki, Gnu / Linux nevashandisi vayo vane mubato uri nani pane ino gadziriro pane Windows nevashandisi vayo. Kubva panguva yekutanga, Adobe yakaita kuti zviomere vashandisi veGnu / Linux kushandisa Flash. Izvi zvakakonzera plugins dzakasiyana uye dzimwe nzira kugadzirwa. Iyi dzimwe nzira dzinoramba dzichishanda, saka kana Adobe Flash yapera, vashandisi veGnu / Linux vanozokwanisa kuishandisa nekutenda kune dzimwe nzira uye kuenderera neFlash kwenguva yakareba sezvatinoda.
Chero zvazvingaitika, kupera kweAdobe Flash ndechimwe chinhu chichaitika uye izvo zvichaita kuti vashandisi vasununguke, kunze kwekunge ivo vachikwanisa kushandisa kodhi yemahara pasina zvichienderana nerudzi rupi rwechombo chekushandisa kana tekinoroji. Chinhu icho vashandisi vazhinji vanozokoshesa kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti kuvandudzwa kweimwe nzira parizvino kuri kubatsira vazhinji vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Adobe ichauraya Flash na2020
Yechina RC yeWifislax64 1.1 yakabuda
Phoenix inounganidza iyo RemixOS baton yemakomputa edu